မ​ကွေးတိုင်း​ ပွင့်​ဖြူမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြေကြီးများကွဲအက် - Cele Platform
မ​ကွေးတိုင်း​ ပွင့်​ဖြူမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြေကြီးများကွဲအက်
Aဒါက်တာဦးထွန်းလွင် သတိပေးထားတဲ့အတိုင်း အထူးသတိထားကြပါ။
လွန်ခဲ့သော ၂၄-၅-၂၀၁၉ နံနက်(၁၀း၃၄)နာရီ က ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်မှ လူမှုကွန်ယက်ကနေ ဇွန်+ဇူလိုင်+သြဂုတ်လများ တွင် မိုးများလာနိုင်ပြီး ရေကြီး မြေပြိုမှု အန္တရာယ် သတိထားကြဖို့ သတိပေးခဲ့ပါသည်။
ယခု ဇွန်လအစောပိုင်းပဲရှိသေးတယ် မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပွင့်​ဖြူမြို့နယ်​​ရွှေ​လှေ​ကျေးရွာအုပ်​စု မှရိုးကုန်း​ကျေးရွာတွင်​ မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြေကြီးများ အက်ကွဲလာကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ထိုသတင်းနှင့်အတူ ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင် သတိပေးခဲ့သော ပို့ကို တွဲတင်ပေးလိုက်ပါသည်။
မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပွင့်​ဖြူမြို့နယ်​​ရွှေ​လှေ​ကျေးရွာအုပ်​စု မှရိုးကုန်း​ကျေးရွာတွင်​ 2.6.2019 ​နေ့က ည​နေ ၅ နာရီအချိန်​မှ ည ၉ နာရီအထိ မိုးသည်းထန်​စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်​
မိုးရွာပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ​တော့ အိမ်​​ခြေ ၂၀ နီးပါးရဲ့အိမ်​ဝိုင်း​တွေမှာ ​ဖေါ်ပြပါပုံပါအတိုင်းဘဲ ​မြေကြီးများကွဲအက်​ပြီး အက်​​ကြောင်းများဖြစ်​​ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်​
ထိုအက်​​ကြောင်းများရဲ့အကျယ်​က​တော့ ၁​ပေ မှ၁​ပေခွဲ နီးပါး​လောက်​ရှိပြီး အနက်​က​တော့ ၁၅​ပေ နီးပါး (ဝါးတစ်​လုံးထိုးကြည့်​ရာတွင်​​အောက်​သို့မ​ရောက်​)​လောက်​အနက်​ဖြစ်​ပါတယ်​လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်​
အဲဒီအက်​ကွဲ​ကြောင်းများဟာဘယ်​လို​ကြောင့်​ဖြစ်​​ပေါ်လာတယ်​ဆိုတာရယ်​ ​နေထိုင်​မှု့အတွက်​အန္တရာယ်​ရှိမရှိဆိုတာကိုသိရှိ​စေဖို့အတွက်​ အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကူညီ​ပေး​စေလိုပါတယ်​ခင်​ဗျား
အဲဒီသတင်းကို​တော့ ​ရွှေ​လှေ​ကျေးရွာအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးနဲ့ မှရိုးကုန်း​ကျေးရွာ ရာအိမ်​မှူးတို့ဆီမှ ပထမသိရှိရပြီး ယခုပို့စ်​ပိုင်​ရှင်​လည်းကိုယ်​တိုင်​သွား​ရောက်​မျက်​မြင်​ကြည့်​ရှုဲ့ပါတယ်​
​ကျေးရွာသူ​ကျေးရွာသားများအာလုံး​ဘေးကင်းစွာ အန္တရာယ်​ကင်းစွာ ​နေထိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ခင်​ဗျားShwe Yi
ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် သတိပေးခဲ့သောပို့…
ဇွန်+ဇူလိုင်+သြဂုတ်လများ တွင် မိုးများလာနိုင်ပြီး ရေကြီး မြေပြိုမှု အန္တရာယ် သတိထားကြဖို့ ဦးထွန်းလွင် သတိပေး
မူယာမာယာတွေပိုဦးမယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ မိုးကြိုကာလ နဲ့ မိုးဦးကာလ တွေမှာ မိုးလျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မိုးဦးကာလ( ဇွန်လ) တွင် မိုးနည်းနေရာမှ မိုးရာသီကာလ( ဇွန်+ဇူလိုင်+သြဂုတ်လ)များ တွင် မိုးများလာနိုင်သည့် အခြေ အ နေ ခန့်မှန်းရရှိထားသဖြင့် မိုးလယ်ကာလ(ဇူ+သြ) တွင် မိုးကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေကြီးမှု၊ မြေပြိုမှု အန္တရာယ် အပါအ၀င် မိုး ရွာ သွန်းမှု၏ အစွန်းရောက်တန်ဖိုးများအန္တရာယ်ကို သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မိုးဦး တွင် မိုးနည်းခြင်း နဲ့ မိုးလယ် တွင် ရေကြီးမှုတို့ကို သတိပြုရန်လိုပါလိမ့်မယ်။
ယ နေ့ လက်ရှိ ရာသီဥတု အ ခြေ အ နေ တွေက တော့ ” Hotter, Wetter and Drier. Face the Future ”
ဒေါက်တာထွန်း လွင်
ဒေါကျတာဦးထှနျးလှငျ သတိပေးထားတဲ့အတိုငျး အထူးသတိထားကွပါ။
လှနျခဲ့သော ၂၄-၅-၂၀၁၉ နံနကျ(၁၀း၃၄)နာရီ က ဒေါကျတာဦးထှနျးလှငျမှ လူမှုကှနျယကျကနေ ဇှနျ+ဇူလိုငျ+သွဂုတျလမြား တှငျ မိုးမြားလာနိုငျပွီး ရကွေီး မွပွေိုမှု အန်တရာယျ သတိထားကွဖို့ သတိပေးခဲ့ပါသညျ။
ယခု ဇှနျလအစောပိုငျးပဲရှိသေးတယျ မ​ကှေးတိုငျး​ဒသေကွီး ပှငျ့​ဖွူမွို့နယျ​​ရှေ​လှေ​ကြေးရှာအုပျ​စု မှရိုးကုနျး​ကြေးရှာတှငျ​ မိုးသညျထနျစှာရှာသှနျးပွီး မွကွေီးမြား အကျကှဲလာကွောငျး ကွားသိရပါသညျ။
ထိုသတငျးနှငျ့အတူ ဒေါကျတာဦးထှနျးလှငျ သတိပေးခဲ့သော ပို့ကို တှဲတငျပေးလိုကျပါသညျ။
မ​ကှေးတိုငျး​ဒသေကွီး ပှငျ့​ဖွူမွို့နယျ​​ရှေ​လှေ​ကြေးရှာအုပျ​စု မှရိုးကုနျး​ကြေးရှာတှငျ​ 2.6.2019 ​နကေ့ ည​နေ ၅ နာရီအခြိနျ​မှ ည ၉ နာရီအထိ မိုးသညျးထနျ​စှာရှာသှနျးခဲ့ပါတယျ​
မိုးရှာပွီး​နောကျ​ပိုငျးမှာ​တော့ အိမျ​​ခွေ ၂၀ နီးပါးရဲ့အိမျ​ဝိုငျး​တှမှော ​ဖျေါပွပါပုံပါအတိုငျးဘဲ ​မွကွေီးမြားကှဲအကျ​ပွီး အကျ​​ကွောငျးမြားဖွဈ​​ပျေါလာခဲ့ပါတယျ​
ထိုအကျ​​ကွောငျးမြားရဲ့အကယျြ​က​တော့ ၁​ပေ မှ၁​ပခှေဲ နီးပါး​လောကျ​ရှိပွီး အနကျ​က​တော့ ၁၅​ပေ နီးပါး (ဝါးတဈ​လုံးထိုးကွညျ့​ရာတှငျ​​အောကျ​သို့မ​ရောကျ​)​လောကျ​အနကျ​ဖွဈ​ပါတယျ​လို့သိရှိခဲ့ရပါတယျ​
အဲဒီအကျ​ကှဲ​ကွောငျးမြားဟာဘယျ​လို​ကွောငျ့​ဖွဈ​​ပျေါလာတယျ​ဆိုတာရယျ​ ​နထေိုငျ​မှု့အတှကျ​အန်တရာယျ​ရှိမရှိဆိုတာကိုသိရှိ​စဖေို့အတှကျ​ အားလုံးဝိုငျးဝနျးစဉျးစားကူညီ​ပေး​စလေိုပါတယျ​ခငျ​ဗြား
အဲဒီသတငျးကို​တော့ ​ရှေ​လှေ​ကြေးရှာအုပျ​ခြုပျ​​ရေးမှူးနဲ့ မှရိုးကုနျး​ကြေးရှာ ရာအိမျ​မှူးတို့ဆီမှ ပထမသိရှိရပွီး ယခုပို့ဈ​ပိုငျ​ရှငျ​လညျးကိုယျ​တိုငျ​သှား​ရောကျ​မကျြ​မွငျ​ကွညျ့​ရှဲု့ပါတယျ​
​ကြေးရှာသူ​ကြေးရှာသားမြားအာလုံး​ဘေးကငျးစှာ အန်တရာယျ​ကငျးစှာ ​နထေိုငျ​နိုငျ​ကွပါ​စလေို့ဆု​တောငျး​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​ခငျ​ဗြားShwe Yi
ဒေါကျတာ ဦးထှနျးလှငျ သတိပေးခဲ့သောပို့…
ဇှနျ+ဇူလိုငျ+သွဂုတျလမြား တှငျ မိုးမြားလာနိုငျပွီး ရကွေီး မွပွေိုမှု အန်တရာယျ သတိထားကွဖို့ ဦးထှနျးလှငျ သတိပေး
မူယာမာယာတှေပိုဦးမယျ
၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ မိုးကွိုကာလ နဲ့ မိုးဦးကာလ တှေမှာ မိုးလြော့နညျးခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး မိုးဦးကာလ( ဇှနျလ) တှငျ မိုးနညျးနရောမှ မိုးရာသီကာလ( ဇှနျ+ဇူလိုငျ+သွဂုတျလ)မြား တှငျ မိုးမြားလာနိုငျသညျ့ အခွေ အ နေ ခနျ့မှနျးရရှိထားသဖွငျ့ မိုးလယျကာလ(ဇူ+သွ) တှငျ မိုးကောငျးနိုငျပါတယျ။ ရကွေီးမှု၊ မွပွေိုမှု အန်တရာယျ အပါအဝငျ မိုး ရှာ သှနျးမှု၏ အစှနျးရောကျတနျဖိုးမြားအန်တရာယျကို သတိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
မိုးဦး တှငျ မိုးနညျးခွငျး နဲ့ မိုးလယျ တှငျ ရကွေီးမှုတို့ကို သတိပွုရနျလိုပါလိမျ့မယျ။
ယ နေ့ လကျရှိ ရာသီဥတု အ ခွေ အ နေ တှေက တော့ ” Hotter, Wetter and Drier. Face the Future ”
ဒေါကျတာထှနျး လှငျ